ဝေ(စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်): ငွေချည်ကြိုးနဲ့ သိုင်းတဲ့ တိမ်
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) 24 October 2011 at 02:02
ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဖောက်ပြီး ရဲရဲရင့်ရင့် လျှောက်ချင်သူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ခံယူချက်ကို လေးစားမိပါတယ်။
မိဘမေတ္တာကိုလည်း နားလည်သဘောပေါက်မိပေမဲ့ အရေးကြီးတာက မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်ရှိရှိ ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစနဲ့ လိပ်ပြာသန့်သန့် ရပ်တည်နိုင်ဖို့လည်း အရေးကြီးသေးတယ်နော်
မေသိမ့်သိမ့် ကျော် 24 October 2011 at 02:37
တကယ်ကို လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင်ပါပဲ။ အောင်မြင်မှုကိုမမက်မောဘဲ ကိုယ်ချစ်တဲ့ စာပေကို မြတ်နိုးတာသဘောကျမိပါတယ် မမရေ။ ဒီလို ကြံ့ခိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိဖို့လည်း နည်းတဲ့ ပါရမီမဟုတ်ဘူး။
blackroze7November 2011 at 09:23
Mya 8 January 2012 at 15:10
Although the story is simple,the words you have used in this novel are so beautiful. No wonder you becomeagood writer. Nice job.
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy!9January 2012 at 02:28
တော်ရုံလူ မလုပ်နိုင်တဲ့ သဘောထားလေးပါပဲ.... လေးစားအားကျဖို့ ကောင်းတယ် ..